Usesophe ukuwaqhulula kwiBafana amagoli oweSwallows - Impempe
Usesophe ukuwaqhulula kwiBafana amagoli oweSwallows
Uveze ukuthi ibimudla ngaphakathi eyokuthi uyoke aphinde abizwe yini kwiBafana Bafana umgadli weSwallows FC, uRuzaigh Gamilidien, osesikwatini esizobhekana neGhana kanjalo neSudan ngasekupheleni kukaMashi.
Ngokusho kukaGamildien, oseshayele iSwallows amagoli ayishumi kule sizini, ngathi kusuke umthwalo emahlombe ephinde ebizwa kwiBafana.
“Ngibaule kakhulu ngaphakathi ngoba sekuze kwenzeka lokhu ebengikufisa. Bekungidla ukuthi ngiyoke ngilithole yini ithuba lokwengeza emidlalweni yami yeqembu lesizwe,” usho kanje lo mgadli.
Ngo-2013, uGamildien udlalele iBafana amahlandla amathathu kodwa akakaze ayishayele igoli.
Uthe kumjabulise kakhulu ukuqokwa kwakhe nguMolefi Ntseki ngoba kuyizinkomba zokuthi ukusebenza ngokuzikhandla kunomvuzo.
UGamildien usezinhlelweni zokufaka isandla kangcono kwiBafana kulokhu kwazise inethi akakaze ayibone emidlalweni yakhe emithathu kuleli qembu lesizwe.
“Ukubuyela kwami kwiBafana kufakazela ukuthi kukhona lokhu okuhle engikwenzayo. Ngijabule kakhulu ukuthi ngiyingxenye yeqembu lesizwe futhi,” kusho yena.
Mayelana nokwenza kangcono kulokhu kubizwa kwango-2013, lo mgadli uthe: “Ngaso sonke isikhathi uma umdlali ebizelwe eqenjini lesizwe kumele kubonakale ukuthi ubizelweni. Inhloso yami ukwenza lokho.
“Okokuqala kumele ngithathe iso lomqeqeshi bese engifaka esikimini. Nakanjani uma sekwenzekile lokho kulapho kuzovela khona amathuba okushaya amagoli, okuyinto namanje engisaphupha ngokuyenza ngiyenzela izwe lami,” kulandisa yena.
Akagudlukile esibalweni samagoli angu-15 azibekele sona ekuqaleni kwesizini yeDStv Premiership.
“Kusobala ukuthi kuyafikeka kuleso sibalo ngakho inhloso manje ukufika ku-15 bese ngiyadlula.
“Lokhu kuhle ngoba ngesikhathi esifanayo kuzobe kusiza iSwallows kodwa futhi ngiyazi sekuzoba nzima manje ngoba amaqembu aseqala ukusijwayela indlela esenza ngayo izinto,” kusonga uGamildien.
Previous Previous post: Zibhimba kakhulu kunokuba zilunge izinto kwiChiefs
Next Next post: IGalaxy iqhubekile nokuqoqa amaphuzu ibambela iSuperSport ekhaya